သင်၏ Galaxy Z Flip ကာဗာစခရင်ကို အသုံးပြုပုံ | Samsung Myanmar
ဖုန်းကို ခေါက်ပြီးပိတ်ထားလျှင်တောင်မှ သင်၏ဖုန်းကို ခေါက်ပြီးပွတ်ဆွဲကာ ဆဲလ်ဖီပုံများရိုက်ပါ။ သင်၏ဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်သည်နှင့် သက်ဆိုင်ရာအက်ပ််များဆီသို့ချောမွေ့စွာပြောင်းနိုင်ရန် အထိအတွေံ ကာဗာစခရင်က တစ်ချက်ကြည့်ရုံဖြင့် အသိပေးနိုင်ပါသည်
Galaxy Z Flip ခေါက်ထားသည်ကို မဖြန့်ပဲ သတိပေးချက်များကို တစ်ချက်အမြန်ကြည့်ခြင်း နှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို ဖြေကြားခြင်း
စနစ်နှိုးဆော်ချက်များ၊ အက်ပ် အသိပေးချက်များ နှင့် မက်ဆေ့ချ်စစ်ခြင်းများကိုစစ်ဆေးရန် သင်၏ဖုန်း ခေါက်ထားသည်ကိုမဖြန့်ပဲ ကာဗာစခရင်ပေါ်တွင် သာသာခေါက်ပြီး ပွတ်ဆွဲလိုက်ပါ။
ဖုန်းကိုခေါက်ထားပြီး သော့ချထားပါက ဘေးခလုတ် S ကို ဖိပါ သို့မဟုတ် ကာဗာစခရင်ကိုဖွင့်ရန် နှစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပါ။ သင် ကာဗာစခရင်ကို နှစ်ချက်ခေါက်လိုက်သည်နှင့် အချိန်၊ နေ့စွဲ နှင့် ဘက်ထရီ အချက်အလက်များက အရင်ဆုံး ပေါ်လာပါသည်။
အသိပေးချက်တစ်ခုက အက်ပ်တစ်ခုကို ဖွင့်စေလိုပါက ယင်းကို သင် အလွယ်တကူ တိုက်ရိုက်ဖွင့်နိုင်ပါသည်။ စခရင်ကာဗာပေါ်ရှိ အသိပေးချက်ကို ခေါက်ပါ၊ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ခေါက်ပြီး ရွေးထားသော အက်ပ်ကို တိုက်ရိုက်သွားရန် ဖုန်းကို ဖြန့်လိုက်ပါ။
Spotify နှင့် အခြား ဂီတ အက်ပ်များကို ကာဗာစခရင်မှဒ်လည်း ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ သီချင်းကို ခဏရပ်ရန် သို့မဟုတ် နောက်သီချင်းတစ်ပုဒ်သို့ကျော်ရန် ဘယ်ဖက်သို့ပွတ်ဆွဲပါ။
အဝင်ဖုန်းကိုဖြေရန် ကာဗာစခရင်ပေါ်တွင် သင် ခေါက်လိုက်ကာ ညာဖက်သို့ပွတ်ဆွဲနိုင်ပြီး ဖုန်းမဖြေရန် ဘယ်ဖက်သို့ပွတ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ သင်သည် နားကြပ်တစ်ခု သို့မဟုတ် ဘလူးတုသ် (Bluetooth) အော်ဒီယိုအပိုကိရိယာတစ်ခုမသုံးနေပါက ဖုန်းခေါက်လျက် အဝင်ဖုန်းတစ်ခုကို ဖြေဆိုသောအခါတွင် စပီကာဖုန်းက အလိုလိုပွင့်ပါလိမ့်မည်။ ဖုန်းခေါ်ရာတွင် အကူအညီရရန် ဘစ်ဘီ (Bixby) ကိုလည်း သင်သုံးနိုင်ပါသည်။ “ဟိုင်း Bixby၊ အမေ့ကိုခေါ်ပါ "ဟု ရိုးရိုးလေးပြောလိုုက်ရုံပါ။
သင့်ဖုန်းကို သော့ချထားသောအချိန်တွင် Bixby ကို အသုံးပြုပုံ
အဆင့် ၁။ ဖုန်းကို ဖြန့်လိုက်ပြီး Bixby Assistant Homeသို့ရှာဖွေသွားပါ။
အဆင့် ၂။ အက်ပ်ကိုဖွင့်ပါ၊ အပိုဆောင်းရွေးချယ်စရာများ (ဒေါင်လိုက် အစက်သုံးစက်) ကို ခေါက်လိုက်ပါ။
အဆင့် ၃။ ဖုုန်းကို သော့ချထားချိန်တွင် ဆက်တင်များ (Settings)ကို ခေါက်လိုက်ပြီး Use နှင့်ကပ်လျက် 'ခလုတ်ကိုခေါက်လိုက်ပါ.'
Galaxy Z Flip ကိုမဖြန့်ပဲ အမြန် ပုံရိုက်ခြင်း
နောက်ကျော ကင်မရာကိုသုံးကာ ဆဲလ်ဖီပုံရိုက်ပြီး ဖုန်းကိုမဖြန့်ပဲ ကာဗာစခရင်ပေါ်တွင် အကြိုကြည့်ရှုပါ။
ကိရိယာကို ခေါက်ထားချိန်တွင် အသက်သွင်းရန် ဘေးခလုတ်ကို နှစ်ကြိမ် နှိပ်ပါ.
အသံ လျှော့သည့် ခလုတ် နှင့် လက်ဖြန့်ပြ သည့်ပုံစံလုပ်ကာ ဓာတ်ပုံများ ရိုက်နိုင်ပါသည်.
1 ဘေး ခလုတ် - ကင်မရာ အက်ပ်ကို ဖွင့်ရန် နှစ်ချက်နှိပ်ပါ
2 အသံ အတိုးအကျယ် ခလုတ် - ဓာတ်ပုံရိုက်ပါ
3 လက်ဖဝါးဖြန့်ပြသည့် ပုံစံအတွက်အိုင်ကွန်
နှစ်ဖက် ကြည့်ရှုခြင်း - ဓာတ်ပုံရိုက်သူ နှင့် အရိုက်ခံသူ နှစ်ဦးစလုံး က ရိုက်နေသည်ကို တွေ့မြင်ခံစားနိုင်ပါသည်
နှစ်ဖက် ကြည့်ရှုခြင်း - ကင်မရာ မီနူး၏ ညာဖက်အပေါ်ဖက်ရှိ အဖွင့်/အပိတ် ရွေးချယ်သည့်ခလုတ် ကို အသုံးချပြီး ကာဗာစခရင်ပေါ်ရှိ ဗျူးဖိုင်ဒါ မှတဆင့် ဓာတ်ပုံရိုက်သူရော အရိုက်ခံသူပါ တစ်ပြိုင်နက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
နှစ်ဖက်ကြည့်ရှုမှု ပြသသည့်အရာ - အရိုက်ခံသူနှင့် အချက်အလက် ခြင်း (အချိန်ညှိ၊ ဖလက်ရှ်၊ ရီကောဒင်း ) ၊ သို့မှသာ အရိုက်ခံသူက ဓာတ်ပုံရိုက်သူအနေဖြင့် အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံရရှိအောင် ပြန်ဆင်နိုင်ပါသည်။
ကြိုးမဲ့ အားသွင်းကိရိယာကိုုသုုံးပြီး Galaxy Z Flip ကိုု လျော်ကန်သင့်မြတ်စွာ အားသွင်းပုုံ